China Juda Kiln-Inner Mongolia 300T / D × 3 gburugburu ebe obibi enyi na enyi wayo kiln mmepụta edoghi factory na-emepụta | Juda
Juda Kiln-Inner Mongolia 300T / D × 3 gburugburu ebe obibi dị mma nke wayo na-emepụta
Nka na ụzụ na tebụl arụmọrụ
Wayo nkume index chọrọ
Uwe na ịdị ọcha
Enweghị okwute okwute, enweghị mbadamba odo n’elu elu okwute
Kol index chọrọ
Uru Calorific Net
≥6800kcal / n'arọ
Enweghị ntụ ntụ
Wayo mma ụkpụrụ
soda caustic /%
Ọrụ / ml
ọkwa pụrụ iche
Pihe Pprofaịlụ ：
1, The e mere mmepụta ikike bụ 100-300 tọn ngwa ngwa wayo kwa ụbọchị. A na-ahọpụta dayameta ahụ ka ọ bụrụ 4.0 -6.0meters, mpụga dị n’èzí bụ 6.5 -8.5meters, ogo dị elu nke kiln ahụ bụ 30-33 mita na ngụkọta elu bụ 38-45meters.
2, Nkume nzu na kol na-esite na mines na mines dị nso nke nwere ike belata ụgwọ njem.
3, Stone urughuru size: 30mm-60mm, 40mm-80mm, 50mm-100mm
4 Nkume na kol na-atụle nke ọma site na-atụle ihe mmetụta.
5, The refractory ihe onwunwe na atụmatụ a bụ otu oyi akwa nke firebrick + otu oyi akwa uhie Adobe + otu oyi akwa nke aluminom silicate eriri chere + mmiri slag.
6, The ájá na anwụrụ ọkụ nwere ájá adopts ájá mwepụ usoro nke cyclone ájá mkpoko + akpa-ụdị ájá mkpoko + mmiri film desulphurization ájá mkpoko. Mgbe ọgwụgwọ gasịrị, a na-ewepụtasị ájá ahụ n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ nnabata mpaghara.
7 、The mmefu ego àmà site batching ịwụ (malite) ka lime ịrụzu belt (nkwụsị), ewepu kiln ntọala, batching ntọala na electric akara ụlọ
Tusoro omumu ：
Usoro batcher: a na-ebuga nkume na kol na nkume na bọket na-ekpo ọkụ na eriri; a na-etinyezi nkume na-eri ihe n'ime eriri na-agwakọta site na feeder.
Usoro nri: a na-ebuga okwute na kol na-echekwa na belt agwakọtara na hopper, nke ikuku na-arụ iji mee ka hopper na-agbagharị na ala maka nri, nke na-eme ka mmụba nke njem ahụ dị elu ma nweta arụmọrụ dị elu na nchekwa nchekwa.
Usoro nkesa: a na-etinye ngwakọta nke okwute na kol n'ime ebe a na-echekwa ya site na feeder na n'ime onye na-agbanwe agbanwe. A na-edozi ngwakọta ahụ n'otu akụkụ nke kiln ahụ site na multi-point rotary feeder.
Wayo ịrụzu usoro: mgbe calcined wayo nkume dị jụụ, okokụre wayo na-atara ha wayo ịrụzu belt site n'akụkụ anọ na-ebudata igwe na abụọ na ngalaba nke ikuku mkpọchi valvụ. Ọ bụrụ na ị ga-agbapụ, a ga-agbanwe ntụzịaka na ọnụọgụ lime iji mezuo ọkụ na isi.
Usoro ngbachapu uzuzu: mgbe emechara ihe ndi ozo, uzuzu nke nwere anwuru na gas site na mbu ndi na-achikota uzuzu iji wepu uzuzu uzuzu; Mgbe ahụ, n'ime akpa nzacha iji wepu obere ájá; Mgbe ị banyere mmiri na-ekpuchi mmiri, ihe ọkụ ọkụ gas ga-ete mmiri na ihe nkiri mmiri oge niile, a ga-amịpụtasị uzuzu uzuzu ya. Ọ ga-abanye na ala nke ihe nchara uzuzu ya na mmiri na-asọba ma gbanye ya n'ime tankị sedimentation. Mgbe ọdịda, a ga-emegharị mmiri dị ọcha.
Electric akara usoro: n'ịkpa German Siemens kọmputa akara usoro, n'ụzọ zuru ezu akpaka mmepụta akara, na-eri-azọpụta, anụ ngwaahịa mma.
Nke gara aga: Ngwurugwu Juda -300T / D usoro mmeputa -EPC oru ngo
Osote: Ihe oku Juda -200T / D 3 ahihia mmeputa -EPC oru ngo
Calcination Wayo n'ekwú
Wayo n'ebubo Ngwaọrụ
Wayo n'ekwú Ngwaọrụ
Wayo n'ekwú Line
Wayo n'ekwú Nsukka
Wayo n'ebubo Usoro
Wayo n'efere Production
11. Ikuku usoro Ugbu a, ọtụtụ lime kilns naanị na-enye ikuku na ala, nke na-adịghị ekesa ọbụna, na-adịkarị mfe na phenomena nke ele mmadụ anya n'ihu na-ere ọkụ, isi mmịpụta, coking na onu nụchaa. Ifufe dị elu nke ikuku ọkụ anyị pụrụ iche na-ebili na mpaghara calcining site na mpaghara jụrụ oyi na ala nke kiln ahụ. Mpaghara jụrụ oyi bụ n'ezie mpaghara mgbanwe mgbanwe okpomọkụ. Ọnọdụ okpomọkụ nke wayo na-adaba ngwa ngwa mgbe ikuku dị n'okirikiri na-ebili elu ...
Nkesa Style Distributor
6.Horizontal feeder The kehoraizin onye nkesa nke n'ekwú ahu nwere a pụrụ iche Ọdịdị. Ọ nwere ike ịgwakọta limestone na kol n'otu, dobe ebe edozi na mpaghara preheating na elu nke ọkụ ahụ, na elu ihe ahụ dịkwa mma ma dịkwa mma, nke mere na a na-ekpo ọkụ ma na-ere ọkụ ọkụ. Tan ọ bụla nke lime na-echekwa ihe karịrị 15 Kg nke kol ma e jiri ya tụnyere ụzọ ndị ọzọ nke nkesa Ndị na-ere ọkụ, ndị na-ere ọkụ na ngwa ndị ọzọ maka lime kiln: Isi akụrụngwa inyeaka nke lime oku na-enye m nri ...
Mkpọchi mkpọchi agba abụọ
10. Sistemụ mkpọchi ikuku Ugboro abụọ ikuku na-ekpuchi ikuku: bụ otu n'ime usoro dị mkpa na mmepụta akwa lime wayo. Ihe izugbe ash mwepụ akụrụngwa bụ ịkwụsị ikuku na iyuzucha ash, a akụrụngwa bụ na-ikuku na mechie ash: na usoro nke ash mwepụ, n'ihi na adiana akara nke abụọ baffles, combustion ikuku agaghị ihihi si akụkụ dị ala, nke nwere ike ịkwalite ogo na mmepụta nke wayo n'ụzọ dị irè. nhazi nke akụrụngwa: akụrụngwa ahụ ...
Calcium oxide na Calcium hydroxide, Calcium hydroxide akụrụngwa, Ime Calcium hydroxide, Aha Azụmaahịa nke Calcium Oxide, Calcium hydroxide Production Line akụrụngwa, Calcium Hydroxide Ime,